Home Wararka (Fadeexo) Wasiirka Isboortiga oo lagu helay musuqmaasuq & tahriibin dhallinyaro
(Fadeexo) Wasiirka Isboortiga oo lagu helay musuqmaasuq & tahriibin dhallinyaro
Wasiirka wasaaradda Isboortiga JFS Marwo Khadijo Maxamed Diiriye aya waxaa ay ku magacaaban tahay wasiirka tan iyo markii Ra’isul Wasaare loo magacaabay Xasan Cali Kheyre.
MOL aya heshay baaritaan dheer kaddib in Wasiir Khadiijo iyo Ninkeeda oo deggan dalka Canada ay ka ganacsadaan dhoofinta iyo tahriibinta dhalinyarada iyadoo lacag u dhaxeysa $15 kun ilaa $20 Kun loogu soo dhameeyo fiisaha dalka ku galka dalal ka tirsan Yurub iyo dalka Mareykanka.
Haddaba waxaan halkan idiinku soo gudbineynaa Fiisaha sida sharci darrada ah loogu qaaday dhallinyaro Mareykanka & Beljim kuwaasoo ugu danbeyntii iska dhiibay dalalka Canada, Jarmalka iyo Sweden.
Cabdulbaari Cali Mudey. Waxaa dal ku galka fiisaha Mareykanka looga iibsaday $15 kun oo doollar, waxaana u iibiyay walaalkiisa oo a Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee BJFS Cabdiwali Cali Muudeey (Halka Hoose ka eeg Fiisaha Mareykanka)
Axmed Cabdullaahi Cali. Axmed waxaa uu aha darawalka Wasiir Khadiijo muddo dheer kaddibna waxa ay u magacowday Agaasime ka tirsan wasaaradeeda markii loo magacaabay Wasiirka Dhalinyarada & Isboortiga bishii April 2017. Sida aan xogta ku helnay waxaa uu bixiyay $10 Kun oo doollar, waxaana xuduuda Canada & Mareykanka ugu yimid oo Canada geliyay Wasiir Khadiijo ninka qaba
Maxamed Ibrahim Yusuf. Waxaa Fiisaha dal ku galka Beljimka looga iibiyay $20 Kun oo doollar wuxuuna iska dhiibay dalka Sweden.
Cabdullaahi Xuseen Cali. Waxaa uu la dhashay darawalkii hore ee Wasiir Khadiijo waxaana dal ku galka Biljimka looga iibiyay $10 kun oo doollar, wuxuuna hadda iska dhiibay oo uu ku nool yahay dalka Jarmalka.
Waxaa jira sidoo kale dhalinyaro kale oo lacago laga qaatay si loogu soo saaro fiisaha dal ku galka Mareykanka, Ingiriiska, Norway iyo Biljim oo aanan ilaa hadda helin fiisihii lacagtiina laga hor marsaday. MOL ayeey u sheegeen in haddii ay heli waayaan fiisada ama lacagtooday ay Maxkamadda Gobolka Banaadir ka dacweyn doonaan Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye iyo Agaasimaha Wasaaradda Dhalinyarada & Isboortiga oo isaga ka aha muqalas soo saarista fiisaha ay lacagta ku bixiyeen, waa sida ay sheegeen.
Fiisaha Dal ku galka Cabdullaahi Xuseen Cali oo hadda magan galyo weydiistay Jarmalka
Fiisaha dal ku galka Mareykanka ee Cabdullahi Axmed Cali Filibino Cadde oo aha darawalka Wasiir Khadiijo oo hadda iska dhiibay dalka Canada
Fiisaha Dal ku galka Maxamed Ibraahim ee Biljimka oo hadda iska dhiibay dalka Swiden
Fiisaha dal ku galka Mareykanka Cabdulbari Cali Muudeey oo ah wiil la dhashay Guddoomiye ku xigeenka Baarlabaanka oo hadda iska dhiibay dalka Canada.
Halkan ka eeg markhaatiyada emailada la diray kuwaasoo lagu codsaday fiisooyin si sharci darro ah